Imininingwane ngeCuba, uyawazi lamaqiniso anelukuluku mayelana neCuba? | Ukuhamba kwe-Absolut
USusana Maria Urbano Mateos | | Cuba
Noma nini lapho ucabanga ngeCuba, izindawo ezinhle, amabhishi amahle, abantu abajabulayo nabanobungane, kanye namasiko kanye amasiko aseCuba abaningi bethu asebevele bazi. Kepha noma kungesikho okokuqala uhambela leli zwe laseCaribbean, kuwumqondo omuhle ukuzazisa futhi ufunde okwengeziwe ngalesi siqhingi esihle. Ngakho-ke, ngezansi sabelana imininingwane ngeCuba namanye amaqiniso afisa ukwazi ngeCuba.
1 Amaqiniso afisa ukwazi ngeCuba
1.1 Umlando waseCuba
1.2 Ukuthuthukiswa kweCuba
1.3 Amaqiniso amaningi anolwazi ngeCuba
Amaqiniso afisa ukwazi ngeCuba
Ukubukeza kafushane i- amaqiniso afuna ukwazi ngeCubaSizogxila kokunye okufana nomlando, intuthuko nolunye ulwazi ngeCuba oluzoba wusizo kuwe.
Ungahle ungazi, kepha igama elisemthethweni laseCuba yilona "IRiphabhulikhi yaseCuba", yona yona eyakhiwa iSiqhingi saseCuba, i-Isla Juventud kanye neziqhingi eziningana ezincane.
Abahambi abahlale bevela babiza iCuca njenge- “El Caimán” noma “El Cocodrilo”, ikakhulu ngenxa yendlela ebukeka ngayo iyisimo sayo lapho ibukwa ngokubuka kwasemoyeni.
Ngenxa yokwandiswa kwendawo yayo, ICuba ithathwa njengesiqhingi esikhulu kunazo zonke eCaribbean, ngoba ihlanganisa indawo eyi-110.860 km².
Akugcini lapho, iCuba inabantu abangaphezu kwezigidi eziyi-11, okuyenza isiqhingi sesibili esinabantu abaningi eCaribbean, kanye nesiqhingi seshumi nesithupha esinabantu abaningi emhlabeni wonke.
Enye ye amaqiniso athakazelisayo eCuba ukuthi izakhamuzi zayo zokuqala kwakungamaNdiya aseMelika aziwa ngokuthi yiCiboney. Basuka eningizimu Melika, kanti amaTaíno afika evela e-Hispaniola ngekhulu lesi-XNUMX AD kanye naseGuanajatabey, ababetholakala engxenyeni esentshonalanga yeCuba lapho abaseYurophu befika okokuqala.
UChristopher Columbus wafika ogwini olusenyakatho-mpumalanga yeCuba ngo-Okthoba 28, 1942, eduze kakhulu nendawo manje eyaziwa ngokuthi iBariay, esifundazweni saseHoguín. Ngaleso sikhathi, UColumbus wabanga isiqhingi saseCuba ngombuso omusha waseSpain.
Yize kungekho okuqinisekile ngalokhu, kukholelwa ukuthi igama leCuba lisuselwa olimini lwesiTaíno. Ukuhumusha kwakho okusondele kakhulu kungaba "Indawo lapho umhlaba ovundile uchichima khona" (cubao) noma "indawo enhle" (coabana). Kukholakala nokuthi uChristopher Columbus waqamba iCuba ngegama likaCiudad Cuba ePortugal.
Indawo yokuqala yaseSpain eBaracoa yasungulwa nguGeorge Velázquez de Cuéllar ngonyaka we-1511.
I-La Habana yidolobha elinabantu abaningi eCuba Njengoba inabantu abangaphezu kwezigidi ezimbili, futhi ingeyesithathu enabantu abaningi eCaribbean. Iyinhloko-dolobha yaseCuba futhi ilapha lapho kutholakala khona izidumbu eziphakeme kakhulu zoMbuso kanye noHulumeni waseCuba.
Ngenxa yokuthuthuka kwesiqhingi njengeSpanish Colony, abantu baseCuba bancipha ngokushesha, ikakhulu njengomphumela wezifo, kanye nezimo ezinzima ezazikhona ngekhulu elizayo.
Inani elikhulu lezigqila zase-Afrika zangeniswa eCuba ukuze zisebenze ezimobeni nasemasimini ekhofi. Ngenxa yalokhu, iHavana yaba yindawo yokuvula izimoto zaminyaka yonke ezinamagugu ahambela eSpain evela ePeru naseMexico.
ICuba yahlala ikoloni laseSpain kwaze kwaba ngu-1898, yize kuze kwaba abaongameli abahlanu abahlukene abazama ukuthenga lesi siqhingi phakathi kuka-1845 no-1898. UMongameli UMcKinley unikele ngamarandi ayizigidi ezingama-300 ukuthenga iCuba, ngaphambi nje kokuba abaseMelika bayihlasele phakathi neMpi YaseSpain NamaMelika yango-1898.
ICuba yathola inkululeko yayo ngemuva kokunqotshwa kweSpain empini yaseSpain neMelika. Ngaphandle kweqiniso futhi ngenxa yeSivumelwano SaseParis, i-United States yasala ilawula lesi siqhingi njengesivikelo ngoJanuwari 1899 futhi saqhubeka nokulawula kwaso kwaze kwaba ngu-1902.
Amaqiniso amaningi anolwazi ngeCuba
Indaba sizoyiphetha ngezine amaqiniso afuna ukwazi ngeCuba okufanele uwazi:
Ngonyaka we-1959, Fidel Castro livela endaweni yesehlakalo njengengxenye eyinhloko embuthweni wamavukelambuso wabavukeli bamaKhomanisi ozobaholela empumelelweni. Kusukela ngaleso sikhathi, uhulumeni wobushiqela kaFidel Castro wayezohlala iminyaka engama-50, kuze kube nguFebhuwari 2008, lapho aphoqeleka ukuthi ashiye isikhundla sakhe ngenxa yezinkinga zempilo.
UMongameli wase-United States, uDwight David Eisenhower, wamukela ngo-1960, uhlelo lwe-CIA lokuhlomisa nokuqeqesha iqembu lababaleki baseCuba ngenhloso yokuthi ukuketula uhulumeni kaCastro. Ukuhlasela okwaziwayo kwe-Bay of Pigs kwenzeka ngo-Ephreli 14, 1961. Ngaleso sikhathi, ababaleki abangaba ngu-1.400 XNUMX baseCuba bafika eBay of Pigs, nokho bahluleka emzamweni wabo wokuketula uHulumeni.
ECuba, zonke izakhamizi ezingaphezulu kweminyaka engu-16 futhi ezingakaze zitholwe zinecala lobugebengu zingavota. Ukhetho lokugcina olwalubanjelwe eCuba lwenzeka ngoFebhuwari 3, 2013, ukhetho olulandelayo lwaba ngo-2018.
URaúl Castro, ophethe iCuba njengamanje, umemezele ukuthi uzoshiya isikhundla sakhe ngonyaka ka-2018, ekupheleni kwesikhathi sakhe seminyaka emihlanu.
Uyazi okuningi amaqiniso afuna ukwazi ngeCuba Yini esingayengeza kulokhu esikutshele kona? Sitshele ngokuhlangenwe nakho kwakho futhi usisize ukunweba lolu lwazi ngeCuba.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Imininingwane ngeCuba
UCristobal Colon wafika eCuba ngo-1492 hhayi ngo-1942 hahaha, imikhonzo
Isikhathi se-TV ka-2019-20 siqala ukuba unyaka onzima kakhulu futhi ongenakubalwa okwamanje. Kukhona amadili amahle kakhulu, abashayeli bezindiza bokuqala abaqhamukayo kanye nokuvuselelwa / ukuvuselelwa okuningana emisebenzini, futhi. Kodwa-ke njengoba isimangalo sithi, "Phuma nabadala, ungene okusha sha." Ngenkathi okunye ukuqoqwa kuphelela kunothi eliphakeme elihleliwe, elilinganiswe kahle, imibukiso ehlukahlukene 'isikhathi sokuphila empeleni sehlisiwe ekuthuthukisweni okufushane. Ngakho-ke, ngeshwa, ngezansi kunohlu lwayo yonke imibukiso yethelevishini okungenzeka ukuthi uyivezela ukuvalelisa kulo nyaka.